काठमाडौंमा एक लाख जनाको 'एन्टिजेन' परीक्षण गर्दै सरकार :: विवेक राई :: Setopati
काठमाडौंमा एक लाख जनाको 'एन्टिजेन' परीक्षण गर्दै सरकार
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा एक लाख जनाको 'एन्टिजेन' विधिबाट कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको जिम्मा इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई दिएको छ।
महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले हिजैबाट उपत्यकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरू गरिएको जानकारी दिए।
महाशाखाले पहिले उपत्यकाको हटस्पटको रूपमा देखिएका ठाउँबाट ऐन्टिजेन परीक्षण थालनी गरेको छ।
निर्देशक पाण्डेले भने, 'चाबहिल, मित्रपार्क, विशालनगरजस्ता हटस्पट ठाउँबाट परीक्षण सुरू गरेका छौं। हिजोमात्र ७ सय २० जनाको परीक्षण गर्‍यौं।'
उनले परीक्षण गरिएकामध्ये ४१ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको बताए। जसमा बढी १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका छन्।
पाण्डेले पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको समन्वयमा आइसोलेसनमा पठाइएको जनाए।
साथै पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको पुनः पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिने उनले बताए।
'पोजेटिभ आउनेबित्तिकै आइसोलेसनमा लाने र पुनः पिसिआर गर्ने भनिएको छ। एन्टिजेनले ३० देखि माथिको सिटी भ्यालु भए भाइरसलाई समात्दैन। तर ३० देखि माथि सिटी भ्यालु भए भाइरस अरूमा सर्दैन भन्ने पनि छ तर जोखिम किन लिने भनेर पुनः पिसिआर गर्ने भनिएको हो,' निर्देशक पाण्डेले भने।
तर सरकारले तय गरेको निर्देशिकामा भने एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजेटिभ आएको नतिजालाई पनि पोजेटिभ नै मान्ने भनिएको छ। त्यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले काम गरिरहेको छ। परिषद्ले यसको प्रभावकारीता अध्ययन् गर्न सुरुका केही पोजेटिभ केसहरूलाई पुनः पिसिआर गरेर अध्ययन् गर्ने भनिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर-७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोलले हिजो आफ्नो वडाबाट २ सय ४७ जनाको परीक्षण गरिएको र त्यसबाट ११ जनामा पोजेटिभ देखिएको बताए। अहिले ती व्यक्तिहरू घरमै 'होम आइसोलेसन' मा रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'हामीले उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा जाने कि घरमै बस्ने भनेर सोध्दा सबैले घरमै बस्ने भन्नुभयो। त्यसैले आवश्यक सुझाव दिई घर पठाएका छौं।'
उनले पोजेटिभ देखिएका ११ जनाकै पुनः पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब पठाइएको जनाए।
महाशाखाले उपत्यकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्न २० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ। निर्देशक पाण्डेले थप कर्मचारीहरू स्थानीय तहका पनि रहने भन्दै कम्तिमा ५० जना कर्मचारीले काम गर्ने जनाए। एन्टिजेन विधिबाटै उपत्यकामा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्ने महाशाखाको तयारी छ।
पाण्डे भन्छन्, 'उपत्यकाको हटस्पट ठाउँहरू सबैमा गर्ने भनेका छौं। कम्तिमा एक लाख जनाको गर्ने योजना छ। थप टेस्ट किटहरू पनि आउने क्रममा छन्।'
सरकारले उपत्यकामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको औंल्याउँदै संक्रमणको अवस्था समुदायस्तरमा कस्तो छ भनेर यकिन गर्न एन्टिजेन परीक्षणलाई अघि सारेको हो।
साथै परीक्षण पनि छरितो हुने भन्दै एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको हो। एन्टिजेन परीक्षणबाट आधा घन्टामै नतिजा दिन सकिने भन्दै निर्देशक पाण्डेले परीक्षण गरेको तत्काल नै मानिसहरूलाई रिपोर्ट दिइएको जनाए।
'समुदायमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन पनि यो परीक्षण गरिएको हो। साथसाथै 'क्लोज कन्ट्याक्ट' नजिकको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू परीक्षण गराउन आएनन् कि भनेर पनि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हो,' उनले भने।
सरकारले एन्टिजेन परीक्षणलाई जोड दिइरहेको बेला विज्ञहरूले भने यसको विश्वसनीयता नभएको भन्दै प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन्। भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसलाई समात्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै यसको प्रयोग गर्नु घातक हुने बताउँछिन्।
एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसको जुन विन्दुलाई समात्नु पर्ने हो त्यसलाई समात्ने सम्भावना नै कम रहेकाले यसबाट पोजेटिभ नतिजालाई पनि नेगेटिभ देखाइदिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
एन्टिजेन परीक्षण भाइरसको प्रकृतिअनुसार प्रभावकारी रहने उनी बताउँछन्।
'एन्टिजेन टेस्ट काम नै नलाग्ने भन्ने हैन। हेपाटाइटिस पत्ता लगाउन एन्टिजेन नै प्रयोग गर्ने हो किनभने यसमा रगतमा धेरै एन्टिजेन सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा सहजै समात्न सक्छ तर कोरोनाभाइरसमा यसबाट संक्रमण पत्ता लगाउनलाई निश्चित विन्दुमा भएको एन्टिजेनलाई समात्नु पर्ने हुन्छ जुन यो टेस्टले समात्ने कम सम्भावना रहन्छ,' डाक्टर भट्टले भनिन्।
निर्देशक पाण्डेले भने एन्टिजेन परीक्षणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसन 'एफडिए' ले समेत स्वीकृति दिएको भन्दै प्रयोगमा ल्याइएको बताए।
'यसलेमात्र ३० देखि माथि रहेको सिटी भ्यालुलाई देखाउँदैन भन्ने हो। तर ३० देखि माथि सिटी भ्यालु भए पनि अरूमा भाइरस सर्दैन भन्ने छ। यद्यपि जोखिम किन लिने भनेर हामीले पोजेटिभ आएकाहरूको पुनः पिसिआर परीक्षण गर्ने भनेका छौं,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १६, २०७७, ०३:५८:००